Any Amboasary : kaominina enina tratran’ny hamehana amin’ny mosary | NewsMada
Any Amboasary : kaominina enina tratran’ny hamehana amin’ny mosary
Raha ny tatitra nataon’ny ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo dia mivaivay ny kere any amin’ireo kaominina enina ao amin’ny distrikan’Amboasary. Nisy ny fitiliana natao tamin’iny volana septambra iny mikasika ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika, nifarimbo­nan’ny ONN sy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka niaraka tamin’ny Unicef Madagascar. Voalaza fa ny 41% amin’ireo ankizy ao amin’ny kaominina 16 any amin’ny distrikan’Ambo­asary izay nanaovana fitiliana dia mahia kely avokoa.
Nahatratra 15% ny ta­han’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika eo amin’ireo mponina ao anatin’izany kaominina izany. Mihoatra lavitra ny fetra 10% azo leferina io salan’isa io.
Manjaka amin’ireo faritra ireo ihany koa ny tsy fandriampahalemana miteraka horohoro ataon’ny dahalo mpangalatr’omby. Sahirana ny mponina mitady skafo harapaka sady miaro tena amin’ny afitsojy ny malaso.
Nilaza ny ONN fa tsy misy ny fiahiana ara-tsakafo raha tsy misy ny fandriampahalemana. Nambaran’ny Pam fa sady fanomezam-boninahitra ny fahafoizan-tenan’ireo mpiasa izay ma­nao ny ainy tsy ho zavatra hamonjena ireo olona iharan’ny hanoanana ireo ny loka Nobel ho an’ny fandriampahalemana vao natolotra nyPam tsy ela akory izao.
Mizara sakafo ho an’olona 12.500 ao amin’ny kaominina enina ao Ambosary ny Pam nanomboka ny 29 septambra izay fotoana na­nambarana ny vonjy taitra noho ny kere mahazo ny olona any atsimo. Sakafo mafana ho an’ny ankizy 560 latsaky ny 5 taona no zaraina amin’izany.